Xilligii cudurka faafa kadib, waxaad diirada saartaa isbedelka cusub ee darbiyada gawaarida.
Qaybaha Gawaarida & Qalabka
Gawaarida Mats ee Honda
Gawaarida Mats ee Nissan
Gawaarida Mats ee Toyota
Gawaarida Mats ee loogu talagalay Volvo
Gawaarida Mats ee loogu talagalay Bmw
Baabuurta Mats ee Dodge
Gawaarida Mats ee loogu talagalay Volkswagen
Gawaarida Gawaarida ee Chevrolet
Baabuurta Mats EE GMC SIERRA & SKODA
Gawaarida Gawaarida EE BUICK & AUDI
Gawaarida Mats ee Hyundai
Gawaarida Mats ee Ford
Gawaarida Mats ee loogu talagalay Mazda
Baabuurta Mats ee loogu talagalay Subaru
Gawaarida Gawaarida BENZ & RENAULT
Baabuurta Mats ee Tesla
Mat jirridda Mat
Mat TPE jeermiska
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan
EE Tesla Model Y
Wixii Chevrolet Silverado Super Crew
Wixii Dodge Ram1500
Wixii Toyota Tacoma Super Crew
Wixii Ford F150 Super Crew
Loogu talagalay Toyota 4 Runner
Xilligii cudurka faafa kadib, waxaad diirada saartaa isbedelka cusub ee darbiyada gawaarida
Cudurka 'COVID-19' ee dilaacay sanadka 2020 wuxuu magaalada ku qasbay inay riixdo badhanka hakadka. Ka dib nolol guri dheer iyo warar aan la tirin karin oo ku saabsan la dagaallanka cudurka faafa, qof walba wuxuu leeyahay fikir cusub iyo faham nolosha iyo nolosha ah. Waxaa sidoo kale jira feejignaan dheeri ah oo dhanka caafimaadka ah.
Baabuurku waa macaamiisha "guriga labaad", caafimaadka maaddada daruuriga gaariga ayaa go'aamisa tayada nolosha dadka.
Ka dib markii uu dilaacay COVID-19, ha ahaato dhibaatada urta baabuurta ee muddada dheer xumaatay ama dhibaatada nadaafadda hawada, bakteeriyada ka hortagga iyo fayrasku waxay sidoo kale noqdeen kuwa diiradda u ah macaamiisha. Kuwaani waxay noqonayaan jihada cusub ee horumarka leh ee "derinnada baabuurta ee caafimaadka leh iyo kuwa bey'adda u fiican".
In kasta oo faafa uu fududaaday, haddana wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosheena: dhinac ka mid ah, ka warqabka isticmaalka macaamiisha ayaa si tartiib tartiib ah u bislaaday. Cudurka faafa kahor, qof walbaba fiiro gaar ah uma siinin dhinacyo badan. Intooda badani waxay kaliya fiiro gaar ah uyeelanayaan sumadda iyo muuqaalka “muuqda”. Macaamiisha "xilligii faafa kadib" ee uu saameeyay cudurku waxay bilaabeen inay yeeshaan shuruudo sare oo ah "arrimo aan muuqan" sida amniga iyo tayada. Dhanka kale, fikradda safarka caafimaadka qaba wuxuu ku qotomaa quluubta dadka. Ka saarista maaskaro ka sokow, wadista baabuur gaar loo leeyahay waxay caado caafimaad u noqotay dad badan.
Sida lagu sheegay daraasad ay samaysay shirkadda Cox Automotive, saddex meelood meel ka mid ah milkiilayaasha baabuurtu waxay tixgelin doonaan "tayada hawada" ee baabuurka markay baabuur iibsan doonaan mustaqbalka. Anaga oo tixgelinayna baahida suuqa ee sii kordhaysa mustaqbalka, waxaan ogaanay in macaamiil aad iyo aad u tiro badani ay aad iyo aad u danaynayaan qalabka dusha sare ee deriska baabuurta lidka ku ah. Isticmaalka aaladaha sunta, deegaanka u fiican iyo bakteeriyada jeermiska ee loogu talagalay gogosha baabuurta ayaa ah isbeddelka guud ee lagu hubinayo caafimaadka iyo badbaadada gawaarida xilligii cudurka ka dib.
Bilowgii aasaasida astaanta, DEAO waxay rumeysneyd in ilaalinta bey'addu ay ahayd shuruudda koowaad ee lagu ogaanayo qiimaha gogosha baabuurka ka dib suuqa. Gaar ahaan xilligii gaarka ahaa ee xilligii cudur-faafintii ka dib, waxay kor u qaadday baacsiga cagaarka, ilaalinta deegaanka, caafimaadka iyo badbaadada heer aan horay loo arag.
Iyada oo wadnaha deegaanka ah, waxaa naga go'an caafimaadka gogosha baabuurta.
Gogosha baabuurta ee caadiga ah waxay isticmaalaan qalabka isbuunyada kiimikada ah. Isbuunku waa badeecad kiimiko ah oo si toos ah uga wasakheysa benzene TDI, cyanide, wakiilka xumbada iyo kiimikooyin kale.
TDI waa kiimiko sun ah oo aad u sun ah oo aan deegaanka u fiicnayn inta lagu jiro hawsha wax soo saarka. Intaas waxaa sii dheer, waxay sii deysaa walxaha sunta ah iyo kuwa xajiinta leh inta lagu guda jiro isticmaalkeeda, taas oo dhaawaceysa habka neef-mareenka aadanaha waxayna la socotaa halista kansarka. Waa badeecad la mamnuucay inta lagu guda jiro Ciyaaraha Olambikada.
Ku lifaaqan qaab dhismeedka malabka ee isbuunyada, ururku waa mid cidhiidhi ah oo hawo la'aan ah. Mar alla markii ay biyuhu galaan derbiyada gawaarida isbuunyada ah, ma sahlana in la qalajiyo, waana sahlan tahay in wasakhda la qabto oo ay noqoto meel ay ka soo baxaan bakteeriyadu.
Deao TPE gogosha baabuurta bey'ada u fiican waxay ka jajabaan qalabka dhaqameed, Waxay qaadataa aaladaha cusub ee ilaalinta deegaanka TPE oo si gaar ah loo aqoonsan yahay soo saarayaasha baabuurta ee dhamaadka sare, aamin ah iyo kuwa aan sun ahayn, kuma jiraan walxaha waxyeelada leh sida formaldehyde iyo toluene, waxay leedahay waxqabad xasiloon, oo wax ku ool ah. waxay xallisaa dhibaatada biyuhu xireen iyo kuwa huwiya.
Laga soo bilaabo sariirta baabuurta wax ku oolka ah ilaa gogosha baabuurka ee quruxda badan ilaa dermaha baabuurta ee caafimaadka qaba, tani waa isbeddel lama huraan ah oo ku saabsan horumarinta suufka cagaha, sidoo kale waa fikradda qiimaha sumcadda ee aan daba soconnay.
Waqtiga boostada: Dec-28-2020
29 Wadada Mingde, Magaalada Menghe, Changzhou, Jiangsu, Shiinaha